Izindaba - Kungani Kufanele Uthole Umkhiqizi Wakho We-PCB E-China
I-China yivelu yenani lomkhiqizo webhodi lesifunda eliphrintiwe elikhulu kunawo wonke emhlabeni. Njengamanje, inani lokukhishwa kwe-PCB e-Asia licishe libe ngama-90% wengqikithi yomhlaba. Phakathi kwabo, iChina neNingizimu-mpumalanga ye-Asia zinokukhula okusheshayo. Kodwa-ke, kungani ukuthola owakho umkhiqizi we-PCB eChina?
Uma kuqhathaniswa namazwe aseningizimu-mpumalanga ye-Asia, iChina ayinayo kuphela inzuzo ephelele yokuhlinzekwa kwempahla eluhlaza kanye nenzuzo engabizi kakhulu, amandla ayo okukhiqiza kanye nokucaciswa kwezobuchwepheshe kungahlangabezana nezidingo zamakhasimende akwamanye amazwe. Imakethe yaseChina ingahlinzeka ngezinsizakusebenza ezanele zephrojekthi yakho. Ngokuthuthuka okusheshayo kobuchwepheshe baseChina, amakhono okukhiqiza e-PCB nawo athuthukiswe kakhulu. Kule makethe enkulu, ungathola kalula umkhiqizi we-PCB onganikeza ngekhwalithi eshibhile nekhwalithi ephezulu. Lesi yisizathu esenza ukuthi ukukhiqizwa kwe-PCB eChina kuya ngokuya kuthandwa kakhulu.
1. Nciphisa izindleko zakho zokukhiqiza?
Embonini yokukhiqiza ye-PCB, izindleko zabasebenzi zithinta kakhulu izindleko zokwenza i-PCB. Ukuba nezindleko eziphansi zabasebenzi emakethe yaseChina kunganciphisa kakhulu izindleko zakho ze-PCB. Ngaphezu kwalokho, ngokuthuthuka okusheshayo kobuchwepheshe bamaShayina, ungakwazi Imakethe yaseChina ithola inani elikhulu lezinto zokwakha ezisezingeni eliphansi, ezingakongela imali eningi ngaphandle kokuthinta ukusebenza komkhiqizo. E-China, ukwabiwa kwezinsizakusebenza kulula kakhulu. Ngaphezu komkhiqizo owodwa, abakhiqizi be-PCB baseChina banganikeza ngesevisi eyodwa, kusukela ekwakhiweni kokuqala kwe-PCB kuya enhlanganweni yokugcina yomkhiqizo ophelile, ungaqiniseka ukuthi ungakushiyela kumkhiqizi we-PCB waseChina ukuthi awuqede. Ngaphezu kwalokho, iChina inesistimu yokuthutha imithwalo elula ngokuhamba okulula. Inganciphisa isikhathi sokulethwa kwezimpahla ukuqinisekisa ukuthi isikhathi nokuncintisana kwemikhiqizo kuhambisana nesikhathi.
2. Ungamthola kanjani umakhi we-PCB oshibhile futhi osezingeni eliphakeme
Ngenxa yemakethe enkulu ye-PCB eChina, izinsizakalo zabakhiqizi bebhodi lesifunda azilingani nakanjani. Ngakho-ke ungabathola kanjani abakhiqizi be-PCB abashibhile nabasezingeni eliphakeme abavela ezinkulungwaneni zezimboni zebhodi lesifunda?
Abakhiqizi be-PCB abalungile bazobheka amakhasimende ngenhliziyo yonke, basuse konke ukungabaza kwamakhasimende, futhi banciphise izindleko zamakhasimende.
1. Uma abakhiqizi be-PCB benganikeza ikhotheshini ecacile kufaka phakathi isakhiwo sentengo
2. Uma abakhiqizi be-PCB bezimisele ukunikeza noma yisiphi isiphakamiso esisebenzayo ukwehlisa izindleko zakho.
3. Uma abakhiqizi be-PCB bekhokhisa noma yiziphi izindleko ezingenangqondo ngemuva koku-oda.
4. Ingabe basebenzisa noma yiziphi izinto ezingaziwa ngaphandle kwemvume yakho.
I-PHILIFAST ibilokhu igxile kwizinsizakalo ze-PCB EMS iminyaka engaphezu kwengu-10, futhi inikeza ngamanani wokuncintisana.
Ibuye inikeze izeluleko ngezobuchwepheshe kumakhasimende ukwehlisa izindleko zamakhasimende ngohlelo oluhlelekile futhi olucacile locaphuni.